Golaha Wasiirada Galmudug oo xalay ku kulmay Magaalada Gaalkacyo. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Golaha Wasiirada Galmudug oo xalay ku kulmay Magaalada Gaalkacyo.
MAREEG 13 November 2015
Gaalkacyo ( Mareeg)-Kadib Shir xalay Xarunta Madaxtooyada Galmudug ee Magaalada Gaalkacyo ay ku yeesheen Golaha Wasiirada Maamulka Galmudug islamarkaana uu Shir Guddoominayay Madaxweynaha Maamulka Galmudug Cabdilkariin Xuseen Guuleed ayaa waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin Amaanka, Dib u furista Dekada Hobyo iyo arrimo kale quseeya howlaha maamulkaasi ku aadan.
Wasiirada Galmudug ee xalay kulmay ayaa isla soo qaaday arrimo ku saabsan dib u howlgelinta Dekedda Hobyo oo hadda la guda galayo maadaama ay cadaan ku sugan yihiin Gobolka Mudug oo hooshaas u heelan, iyo sidoo kale arrimo ay ka mid tahay jid gooyooyinka la dhigto deegaanada maamulkaasi oo digniin laga soo saaray.
Dadka dhigta jid gooyooyinka sharci darrada ayaa lagu wargeliyay in gaadiidkii loo isticmaalo ay la wareegi doonaan maamulka Galmudug, ciddii lagu dilana aan waxba la iska weydiin doonin.
Ugu dambeyn ayaa la sheegay in masuuliyiinta Maamulka Galmudug ee Gaalkacyo ku sugan mudada halkaas ay joogeen wax badan ay soo kordhiyen maadaama beelihii halkaas degenaa si nabad ah ay hubka ugala wareegeen.